Ahoana ny fomba famoronana sy fizarana lisitra avy amin'ny Mac mankany iOS amin'ny iCloud | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fomba famoronana sy fizarana lisitra avy amin'ny Mac mankany iOS amin'ny iCloud
Laura varo | | Tutorials
Fantatsika fa avy amin'ny App Store dia afaka mahita fampiharana isan-karazany mamela antsika izahay mamorona, manova ary mizara lisitra ny lahasa amin'ny fitaovana Apple rehetra. Na izany aza, vitsy ny mpampiasa no mahalala ny fahafaha-mamorona lisitra misy safidy mivantana kokoa izay ampidirin'ny rafitra azy ireo, ny fampiharana Fampahatsiahivana.
Ny lisitry ny raha-hatao dia mora ampiasaina tazomy ny filaminana amin'ny fiainana isan'andro. Na an-trano na ao an-trano ekipa miasa Ny lisitry ny asa atao betsaka kokoa dia mamela fitantanana asa voarindra sy mahomby kokoa. Amin'ity lesona tsotra ity dia hazavainay ny fomba famoronana lisitra azo atao avy amin'ny iCloud hizara sy hitazona vaovao hatrany amin'ny fitaovana hafa amin'ny fotoana tena izy.
Mamorona lisitry ny raha-hatao avy amin'ny iCloud amin'ny Mac
1 Dingana: Ny fomba dia tena tsotra. Sokafy fotsiny ny browser ary midira ao amin'ny kaontinao manokana iCloud: ampidiro ny mailaka fisoratana anarana sy ny teny miafinao hidirana ary midira amin'ny birao miaraka amina fampiharana fanombohana ao amin'ny iCloud.
2 Dingana: Raha vao tafiditra, midira amin'ny fampiharana Reminders, avy amin'ny toerana ahafahanao mamorona ny lisitry ny lahasa sy mitantana ny atiny.
3 Dingana: Ao amin'ny faritra ankavia, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra «+» avy eo amin'ny zoro ambony, azontsika atao manampy lisitra vaovao izay hampiana araka ny filaharana ambanin'ilay voalohany, "Fampahatsiahivana" ary misy ny tondro loko izay azontsika ovaina.
4 Dingana: Avy eo ny safidy fanovana lisitra dia hiseho amin'ny faritra mety, izay azontsika atao manampy asa amin'ny fipihana eo amin'ny tsipika «Item vaovao». Ny marika izay miseho amin'ny ankavia isaky ny lahasa dia ho ny famantarana ny asa tokony hatao ary amin'ireo efa vita.
5 Dingana: Rehefa vita ny lisitra dia hiseho izy mandeha ho azy ao amin'ny fampiharana Reminders amin'ireo fitaovan'ny iOS voasoratra anarana ao amin'ny iCloud miaraka amin'ilay mailaka mitovy. Ho an'ny zarao amin'ny fitaovana hafa, ao amin'ny fizarana ankavia dia hahita bokotra iray izay manome antsika safidy hizara ny lisitra amin'ny alàlan'ny mailaka isika.
Ampidiro ny mailaky ny mpampiasa izay hizaranao ny lisitry ny asa ary tsindrio ny "ekeo". Handray ilay mpampiasa fanasana ao anaty boaty zarao ny lisitra, ary amin'ny fampiharana Fampatsiahivana dia afaka miditra an-tsehatra ianao fanovana sy fitantanana ny atiny.
Ny famoronana lisitra zaraina dia tena mora ary afaka manamora asa maro amin'ny ekipa, lisitra fiantsenana, na lisitry ny dia. Tsy mila izany ianao tsy misy fampiharana hafa hanatanterahana ireo asa tsotra indrindra ao anatin'ny fampiharana Fampatsiahivana mihitsy amin'ny iCloud sy amin'ny fitaovana iOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba famoronana sy fizarana lisitra avy amin'ny Mac mankany iOS amin'ny iCloud
Tsy mitsaha-mitotongana ny varotra Apple any Sina
Apple Gatekeeper dia manakana ny malware vaovao hita: OSX / Keydnap